Ruux muslimay oo la diiwaan geliyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Registrator håller på att kika igenom inskannade register. Foto: Kristian Åkergren/Sveriges Radio
Ruux muslimay oo la diiwaan geliyey
Way dhici kartaa iney intaa ka badan yihiin
La daabacay fredag 12 december 2014 kl 14.25
Ciidammada ammaanka ee nawaaxiyada galbeedka
Götaland iyo Östergötland ayaa si khaldan oo sharciga aan waafaqsaneyn u isticmaaley xogta-shakhsiyadeed ee sinjiga, fikirrada siyaasadeed, caqiidada iyo caafimaadka, sida ay sheegtay hayadda ammaanka iyo ilaalinta xuquuqda sharafta qofka ee magaceeda loo soo gaabiyo oo amuurtaa baaritaan ku sameeysay.
Madaxa hayadda SIN Sigurd Heuman ayaa sheegay iney baaritaankoodii sidoo kale ku heleen diiwaan-gelin aan sharci aheyn:
- Haa, waa mid aan qabo. Waxaannu horay u sheegney iney jiraan diiwaan-gelin aan xeerka waafaqsaneyn.
Qoraal dacwad looga gudbiyey xeer-ilaalinta ciidanka ammaanka ee galbeedka Götaland. War-bixinta lagu qoreyna ahayd oo keliya ruux galay diinta islaamka. Waa khalad aad u wayn oo xeerka jebinaya.
Waxaa kaloo socda baaritaanno lagu wado qoraallo kale ee laga heley laanta ciidanka ammaanka ee galbeedka Götaland. Midkaasina oo ciidanka ammaanka qudhoodu ay dacwad isaga gudbiyeen la xiriirta diiwaan 180 ruux oo ey ku qorraayeen magaca, tobanka lambar ee ruuxa iyo cinwaannada dadyoow ku kala dhaqan dalka dacalladiisa ee gacan ka geeystey bannaan-baxyo looga soo hor-jeedo tarxiilka magan-gelyo-doonka.
Hayadda SIN ayaa dhaleeceeyntaa u aragta mid adag oo halis ah, isla-markaana aamin-san in maamulka ka dhalan doona isku-shaandheeynta hayadda ammaanka ey xoogga saarto sidii loo sixi lahaa daldaloolladaa. Sigurd Heuman ayaa sheegay in hayaddiisu mustaqbalka sameeyn doonto baaritaanno kale:
- Guddiga ayaa gaaray go'aan ah in baaritaanno hor leh la sameeyo. Waxaan aamin-sanahay in haddii khaladaad sidaa u badan laga heley laamaha ciidanka ammaanka ey dhici karaan in laamo kalena sidaa oo kale ey ka jiri karaan khaladaadkaa.
Laanta ciidanka ammaanka ee Skåne oo diiwaan-gelin ku sameeyay dadyow ka tir-san qowmiyadda Roomiga ayaa sidoo kale baaritaan ay SIN ku sameeysay. Kolkii uu diiwaankaasi soo shaac-baxay waxaa qayb ka mid ah loo wareejiyey diiwaan kale oo iminka baaritaan lagu sameeyey. Diiwaankan cusub ee lagu wareejiyay ayaa ah mid sharciga waafaq-san, sida ay sheegtay SIN.